Madaxa Hawl-Galka Zambia Oo Sheegtay In Muqdisho Dhimashadu Caadi Ka Tahay - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Madaxa Hawl-Galka Zambia Oo Sheegtay In Muqdisho Dhimashadu Caadi Ka Tahay
December 2, 2018 December 2, 2018 News Editor907
Cecilia Kabube, waxaa ay madax ka tahay howlgalka Zambia ee Soomaaliya,waa hoggaamiyaha dhowr ciidan oo ka mid ah Booliska AMISOM iyo kuwa Soomaaliya oo Habeenkii xaqiijiya amniga magaalada.
Wariyayaal ka socda Qaaradda Afrika ayaa xilli habeen ah ku booqday dhowr meel oo ka mid ah Magaalada oo ay howlgal ka wadday xilligaas.
Waxaa ay si gaar ah madax ugu tahay koox Boolis isku dhaf ah oo ka kala socda Soomaaliya, Ghana,Seire Leone ,Kenya iyo kuwo kale,waxaana ay wadajir uga howlgalaan magaalada xilliga habeenkii ah.
Wariyayaasha ayaa weydiiyay shaqadeeda,waxaana ay tiri “waa howl adag, qof la aamini karo ma jiro,ma taqaanid qofka doonaya in uu ku dilo,mararka qaar kuwo boolis isu ekeysiiya ayaa dilaya biri mageydada, ma aamino booliska, iyaguna nama aaminaan, ilaa aan muddo dheer isla shaqeyno,waxaa ay wataan gaadiid u gaar ah,annagana waxaan wadannaa gaadiid noo gaar ah.”
Shaqada ay ku hoggaamiso afarta qeyb ee Booliska ee ay madaxda ka tahay ayaa ah, kormeerka,la talinta,warbixin gudbinta iyo dabagalka shaqada Booliska Soomaaliya, sida habka waafaqsan sharcigam dhowridda xuquuqda aadanaha iyo wixii la mid ah.
“waxa na ilaaliya waa cibaadada,dhaqan ayey u tahay saraakiisha halkan in ay cibaadeystaan, ma jirto meel amaan ah Muqdisho gudaheeda,dhimashada caadi ayey ka tahay, rasaasta xilli kasta ayaad maqleysaa, Qaraxyada ayaa la mid ah,” ayey tiri Kabube.
“dadka halkan jooga kama baqaan dhimashada, qarax ayaa dhici kara,dad ayaana ku dhiman kara, dadka kale shaqadooda ayey iska qabsanayaan ,mararka qaar halkii uu qaraxa ka dhacay ayey u cararayaan”, ayey sii raacisay.
Kabube, waxaa ay sheegtay in tan iyo markii ay ku biirtay AMISOM, aysan jirin qof ka socda dalkeeda oo ku dhintay rasaasta iyo qaraxyada ka dhaca Muqdisho,waxaa ay sheegtay in 31 xubnood oo ka mid ah Booliska Zambia ay kala shaqeeyaan Booliska Soomaaliya xaqiijinta amniga Muqdisho,20 ka mid ah waa Rag,11ka kalena waa Haween.
Booliska Zambia waxaa ay ku siganyihiin goob amaan ah oo ay AMISOM leedahay,halkaas oo aan qofna loo oggoleyn wixii ka dambeeya 10:00PM ama Afar saac Habeennimo,marka laga reebo ciidanka roondada ku jira.
Wariyayaasha ayaa loo xiray dharka aanay xabadda Karin,waxaa la geeyay xerada Jeneraal kaahiye ee Booliska Soomaaliya, iyo xaruntii hore ee Baarlamaanka Soomaaliya si ay u qiimeeyaan heerka nolosha Muqdisho ee habeenkii.
Isha Warka: zambiareports.com
Gunji Halkaan Hoose:- https://zambiareports.com/2018/12/02/iron-lady-inspector-cecilia-kabube-leads-zambian-mission-somalia/